Aostralia: Fonon-tsigara Voalohany Erantany Tsotra Misy Hafatra Mazava – Tsy Misy Mari-Pamantarana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2012 14:55 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, polski, Italiano, English
An-kafaliana no nandraisan'ny ankamaroan'ireo mpiserasera ny lalàna vao nivoaka tany Aostralia mikasika ny fonon-tsigara misy hafatra tsotra sy mazava tsy laroina haingo, izay nanomboka ny 1 Desambra 2012. Ny tenifototra #plainpackaging ao amin'ny twitter sy ny fitadiavana ny “plain packaging” dia nahazo bitska fanakianana vitsivitsy. Ny Huffington Post dia nampiseho taratra ny fahalinana iraisam-pirenena amin'ity voalohany erantany ity:
Niparitaka nanerana ny talantàlana tany Aostralia ireo sigara nofonosina tanaty fonony misy hafatra tsotra sy mazava tsy laroina haingo, nahatonga ny Firenena Oseanika ho voalohany erantany nandràra ny fametahana ny sary famantarana ny orinasa mpanao sigara sy ny loko amin'ny fonon-tsigara.
Mihatra ao Aostralia ny lalàna momba ny fonosana sigara misy hafatra tsotra sy mazava tsy laroina haingo
Sary avy amin'i Maria Nguyen © Zon'ny Mpamorona Demotix 1 Dec 2012
Mipetraka ho mpanelanelana ny bilaogin'i Andrew Dixon Fananahana, Rongony ary Politika (Sex, Drugs & Politics) :
Ireo kaompania mpanao sigara dia milaza ampahibemaso fa tsy handeha io. Ny fanadihadiana nataoko mikasika ny lanjan'ny Marika Famantarana dia milaza fa tena ho izay mihintsy no hitranga. Ny Governemanta dia mandika izany ho “fandresena ho an'ny Fianakaviana”, izay fomba filazan'izy ireo izay rehetra ataony. Tonga soa amin'ny Ady lehiben'ny Marika Famantarana, izay very ao anatiny ny ady hanànana marika famantarana.
Nefa roa no ahazoana izany. Hoy izy manindry:
Tsy ampisalasalàna no ilazako fa ny fonosana misy hafatra tsotra sy mazava tsy laroina haingo dia hisy vokany tsara ho amin'ny fahasalamam-bahoaka.
Nefa miasa saina ihany i Andrew momba ny endrika araka ny lalàna sy ara-barotra :
Nefa io dia ohatra iray voalohany tsy azo ekena hanome alàlana ny governemanta hangalatra (na hamotika) amin'ny fomba tsy takatry ny saina ireo fizakà-mànana ara-tsainan'olon-tsotra izay tena sarobidy.
Ilay Mpibilaogy Don Aitkin dia nanontany tena ‘Moa ve ny fanovàna ny fonosana hisy hafatra tsotra sy mazava tsy laroina haingo dia fahombiazana lehibe amin'ny fahasalamam-bahoaka?:
Izaho dia tsy mba anisan'ny mpanohana ny fitondràna mpitsetra, ka mahita ireny fonosana misy hafatra tsotra sy mazava tsy laroina haingo ireny ho fahombiazana kokoa ho an'ireo mpandrindra noho ny hoe fandresena lehibe ho an'ny fahasalamam-bahoaka. Angamba kosa mety mba hampihena bebe kokoa ny fironan'ireo tanora amin'ny fahazaram-piainana miaingitraingitra sy tsy maha-salama izany. Nefa aleoko aza nisafidy ny làlana fanomezam-pahafantarana misimisy, ka mihevitra ny olona ho misaina, fa tsy sanatria toy ny saribakoly.
Na dia izany aza, dia toy ny misy endrika tsy ampy fisainana ny fihetsik'ireo mpifoka manoloana ireo fanovàna. Tahaka ny mino ireo mpifoka sasantsasany fa ratsy tsiro ireo sigara avy tamin'ilay fonosana misy hafatra tsotra sy mazava tsy laroina haingo raha miohatra amin'ireo sigara tamin'ny marika teo aloha. Ny olona sasany dia mieritreritra fa ireo sigara teo aloha ihany no nahodin'ny Ministeran'ny Fahasalamana.
Tsy mba i Mr. Leopold izany. Natombony ny resaka fonosana Oliva manome setroka maitso …tsiro hafa ? ao amin'ny ausrc.com/forum [rc=remote control]:
Maro amin'ireo mpifoka sigara any ho any no mahita ny fahasamihafan'ny tsiro rehefa mifoka ilay amin'ny fonosona hatramin'izay mihoatra amin'ilay fonosana vaovao***maitso?? Tsy mitovy tsiro amin'io ilay fonosana maitso sady toy ny tsirom-body.
Tsy ao an-tsaina mihitsy ny hieritreritra toy ny hoe izaho nanisika ilay sigara vaovao tao anaty fonosana taloha izay mbola feno sigara ny antsasany sy nanafangaro azy rehetra tao ary dia nisy fahasamihafàny ve?
Adam Ferrier, voaiben'ny resa-pifandraisana sy dokambarotra avy amin'ny masoivoho mpanao dokambarotra Naked Communications dia niezaka nanazava ity toe-javatra manahirana ity ao anatin'ny Unleashed:
Rehefa manandran-tsiro zavatra isika dia matetika tsy dia mahatadidy hoe tahaka ny ahoana ilay tsiro, fa mamorona tsiro – manamboatra azy, miankina amin'ireo izay zavatra fantatra eo am-pelatànana.
… Rehefa manandrana sigara, mandray anjara amin'ny fanomezan-tsirony daholo izay dokambarotra rehetra mikasika an'izay sigara izay.
Na izany aza anefa, dia manohana ilay lalàna izy:
Isaky ny fandraisanandraikitry ny governemanta – ny fandraràna ny dokam-barotra, ny famerana ny fitsinjarana, ny fanondrotana haba isan-karazany, ny fanovàna fonosana ho tsy misy mari-pamantarana – dia samy misy fiantraikany avokoa.
Fa raha izany no marikin'ny fanjakàna mpitsetra, dia ohatran'ny zanakalahin'ilay mpifoka sigara matin'ny homamiadana izay tena mbola tanora herotrerony aho ka falifaly hiteny hoe “Goo goo ga ga. Mba karakarao koa izahay.”
Mihevitra ny hampiditra lalàna mitovitovy amin'izany momba ny fonosana miady amin'ny fifohana sigara ireo firenena hafa toa an'ny Grande Bretagne sy Nouvelle Zelande. Ny Huff dia naharay fanehoankevitra mihoatra ny 400 raha nangataka ny hevitry ny Amerikana mikasika ilay hevitra.
Ny valintenin'i LorentDiscard dia tena mahavelom-bolo:
Tena fivoarana lehibe izany. Efa hita sahady fa misy rasaka porofo tsy hita fotota loatra milaza fa na dia ireo mpifoka mafy loha, nanankin-tena tamin'ny sigara aza dia tahaka ny nampihena kely ihany ny fankafizan-dry zareo ireo marika mahazatra azy.
Tsy mino ny fandraràna aho, fa mino tanteraka kosa amin'ny fiarahana mandray andraikitra hiaro ireo zanantsika, ary dia any isika no hahita ny vokatra mivaingana.
Manana fomba fijery malalaka kokoa i Hgcohan:
Fitondrana Mpitsetra, Governemanta mpitsabatsabaka. Ny Fahafahana dia midika hoe ‘fisiana malalaka’. Alàlana avy aiza eto amin'izao tontolo izao no ahafahan'ny governemanta manapa-kevitra ny amin'ny famonosana sigara? Izany dia efa porofo mivaingana amin'ny fanitsakitsahan'ny governemanta ny fetran'ny fahafàhana.
Ireo Indostria mpanodina sigara dia nihazona mafy fa io fonosana tsy misy loko io dia hampirongatra ny varo-maizina sy ny halatra. Hita taratra ao amin'ny adihevitra ataon-dry zareo avy ao Grande Bretagne amin'izao fotoana izao izany .
Tena hahaliana tokoa ny hahita raha hisy firenena hafa ho voatarik'i Aostralia ato ho ato.